China Ndenye Di na Nwunye factory na-emepụta | ZAILI
A na-etinye ihe mgba ọkụ na tagzi ahụ, a ga-etinyekwa ihe nchebe ahụ site na ịpị bọtịnụ ntanye na tagzi. Ya mere, nsogbu nke ịpụ na tagzi echekwara. A na-enweta teknụzụ ọhụụ nke imeghe ma mechie ihe nchebe ahụ site na iji usoro eletriki eletrik nke excavator, karịa usoro hydraulic. Ya mere, a na-eji ike eletrik dochie nrụgide mmanụ dị elu, nke na-azọpụta ụgwọ na mmepụta. N'ime tagzi, enwere ike iji ụda opi na-akpaghị aka chọpụta ma ejikọla ya. N'ihe banyere waya mebiri emebi, enwere ike ijide nchekwa nke ntụgharị aka.
1, Ọrụ mwekota imewe: iji elu-ike manganese ígwè na bughi mwekota n'ibu imewe, inogide na adabara nzukọ chọrọ nke excavators nke iche iche tonnages.
2, Usoro nchekwa akpaka zuru ezu: A na-etinye ọkụ eletrik na tagzi iji dochie nrụgide mmanụ dị elu na ọkụ eletrik, nke dị mfe maka onye ọkwọ ụgbọ ala ịrụ ọrụ.
3, A na-etinye valvụ na-achịkwa hydraulic na ngwaọrụ nchebe na-arụ ọrụ na cylinder mmanụ ọ bụla iji hụ na njikọta ngwa ngwa nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma mgbe mmanụ mmanụ na sekit na-apụ.
4, Njikọ ngwa ngwa ọ bụla nwere usoro nchebe ntụtụ nchekwa iji hụ na njikọta ngwa ngwa nwere ike ịrụ ọrụ ọfụma ma ọ bụrụ na ọdịda nke njikọta ngwa ngwa cylinder wee rụọ ọrụ "mkpuchi abụọ".
5, Di iche iche na otutu
Di iche-iche nke njikọ njikọ ana achi achi na otu njikọ nwere ike iji na otutu ụdị nke gwupụtatụrụla nke otu tonnage. N'otu oge ahụ, ntụgharị nke njikọ ahụ na-emekwa ka ọtụtụ njikọ dị iche iche gụnyere grabs, rippers, wdg, ọkachasị Ọ dị mma ijikọ ngwaọrụ ndị a, dị ka ndị na-emebi emebi, ndị na-akụ nkume, ndị na-amị amị.
Ofụri Esịt akpaka nchekwa usoro
Nke gara aga: Ikpo Hammer
Excavator Ndenye Coupler
Mmakọ Type Hydraulic Coupler
Di na Nwunye Hydraulic
Hydraulic Ndenye Coupler
Ushdị Hyddị Hydraulic Coupler
Mkpọrọ Mkpọrọ Mkpọrọ, Pulverizer N'ihi Excavator, Shiee N'ihi Excavator, Hb Series emebi, Crusher N'ihi Excavator, Control valvụ N'ihi emebi,